China Kutsiva Tsika Yetsika uye Thread Kusona 20Khz Ultrasonic Welding Machine ye Thermoplastic Micheka Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
Kutsiva Tsika Yetsika uye Thread Kusona 20Khz Ultrasonic Welding Machine ye Thermoplastic Micheka
Chinhu Kwete QR-S20DL
Rakafara Welding vhiri 22mm
Yakafanana Transducer 5020-4D PZT4
Saizi jenareta 400 * 195 * 98mm
Ultrasonic yekucheka muchina musimboti unogona kusona akawanda thermoplastic machira. Inofananidzwa neyakajairwa tsono uye kusona tambo, kusona kwe ultrasonic hakudi tsono uye tambo, yakasimba yekusona simba, yakanaka chisimbiso uye nekukurumidza kusona kumhanya. Uye iyo ultrasonic isina musono kusona inogadzirisa zvakakwana dambudziko rekuti kufamba kwekutungamira kweiyo ultrasonic welding musoro hakuenderani nemafambiro ekufambisa kwejira, uye dambudziko rekusingaenzanisirane rinotsiva zvakajairika wekusona muchina kusvika padanho rakakura.
Zvakanakira musono kusona
1. Kugadzikana kwepamusoro: Wiricheya vhiri uye kumanikidza vhiri kutenderera zvakanyatsopindirana panguva ye ultrasonic isina musono kusona, hapana musiyano mukumhanya uye kona, uye hazvizokonzere kutambanudza, kukanganisa kana kushanduka kwejira, iro rakanyatsojeka. Kutenda kune inopisa-melt mhedzisiro, hapana chikonzero chekushandisa tsono tambo, chigadzirwa chacho hachina mvura, chakareruka uye chiri nyore kupeta.
2. Welding uye kucheka kuwiriranisa: Ultrasonic musono yekumonera michina haina kukodzera chete kuenderera kusona, asi zvakare inogona kutema machira panguva yekumonera, uye woziva otomatiki kumucheto banding.
3. Hapana kupisa kwemhepo: Simba rinopinda mukati meiyo simbi yekumonera panguva yekusona ye ultrasonic, uye hapana kupisa kwemhepo. Munguva yekuenderera kwekusona, kupisa hakuzoendeswa kune chigadzirwa, izvo zvinonyanya kubatsira kuputira zvigadzirwa zvinopisa kupisa.
4. Musoni unodzorwa unodzivirirwa: Mucheka unodhonzwa nevhiri rekuwisira uye yekumanikidza roller, ichipfuura napo, uye jira racho rakasungwa nema ultrasonic mafungu. Nokuchinja kumanikidzwa chinotenderera, kuti nomoto musono kukura uye nekusimbisa, nebefu zvinogona kuchinjwa.
5. Wide akasiyana mafomu: ese thermoplastic (akanyoroveswa mushure mekudziya) machira, matepi akasarudzika, uye mafirimu anogona kusunganidzwa uchishandisa ultrasonic isina musono yekumonera michina, uye iwo ma rollers akagadzirwa nesimbi yakaoma kuti iwedzere hupenyu hwebasa.
Pashure: 20Khz Ultrasonic Plastiki Welding Machine yeThermoplastic Chinyorwa
Zvadaro: Yakakwira Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic Kuisa Simbi Midziyo yeThermoplastic Cloth